Nezvedu - Shuiyuan Nyowani Energy Technology Co, Ltd
Yakavambwa muna 2000, Shenxian Shuiyuan New Energy Technology Co, Ltd iri mudunhu reShandong, isu tine makore makumi maviri nhoroondo yekunaka kwemakemikari synthesis, makemikari makemikari, makemikari anobatsira vamiririri. isu tiri fekitori yekugadzira yakasarudzika mukugadzira Dibenzoylmethane (DBM) uye furfural. Iyo kambani ikozvino inoshandisa matanda mazana matatu, kusanganisira makumi maviri vakapedza kudzidza kubva kukoreji uye mainjiniya makumi maviri neshanu uye nyanzvi dzehupfumi. , Shangqiu juyuan kemikari manufactory uye Liaocheng shuiyuan nyowani simba tekinoroji manufactory.The kambani technical technical simba, iyo bvunzo nzira yakakwana uye zvigadzirwa zvekugadzira zvakanaka.
Seimwe yenyika huru kugadzirwa kwehunyanzvi Dibenzoylmethane (DBM) fekitori ine pagore inokwana zviuru gumi metric matani, semumwe wevanyanzvi vepasi rose vanogadzira furfural ine pagore kugona 30,000 metric matani. Izvo zvigadzirwa zvinonyanya kushandisa methanol uye acetic acid kubva muchibage cobs, anoshandiswa mukugadzira Dibenzoylmethane uye furfural, zvakasiyana siyana zvekushandisa, kunyanya kune furfural doro resin yemishonga uye yakanaka chemakemikari indasitiri munzvimbo. Zvigadzirwa zvevhu zvinogona kushandiswa mukugadzira mishonga, furfuryl doro, zvinonhuwira, zvinwiwa, resini uye zvimwe zvigadzirwa.
Chii isu ainyanya kubereka?
Yedu sei Kugadzira Base ？
Iyo fekitori ye83,916 mativi emamirimita kusanganisira zviuru makumi mashanu emamirimita mita musangano nzvimbo.Company ine vashandi vanopfuura mazana matatu, simba rakasimba rehunyanzvi, ine nyanzvi inobata mukutsvaga kutsva kwechigadzirwa nekusimudzira timu yehunyanzvi, uye chengetedza kubatana kwepedyo nevazhinji vekumba masainzi akakurumbira ekutsvagisa kwesainzi. , isu tinoteerera kune pfungwa yesainzi uye tekinoroji yekuvandudza uye kuchengetedza kwezvakatipoteredza nyowani isiri chepfu PVC yekubatsira kupisa inodzikamisa Dibenzoylmethane (DBM) uye furaldehyde uye furfural zvigadzirwa kugadzirwa uye yekutengesa kambani yegore kugadzirwa kugona kwemakumi mana emakumi matani, iyo kambani ine yepasi rese tekinoroji yekugadzira. mutsetse uye wepasirese wepasi rose Dibenzoylmethane (DBM) zvigadzirwa zvekugadzira, mhando yechigadzirwa yasvika padanho repasi rose.
Ndapota inzwa wakasununguka kuti utaure nesu neemail yedu:
kana uine chero mibvunzo, isu tichaedza kupindura mukati maawa gumi nemaviri.